Degso Offroad Bus Mountain Simulator APK loogu talagalay Android
Degso Offroad Bus Mountain Simulator
Bilaash Degso loogu talagalay Android (47.00 MB)
Degso Offroad Bus Mountain Simulator,
Simulator Offroad Bus Mountain, oo ku jira qaybta baabuurta iyo gawaarida ee moobilka guurguura, wuxuu u eg yahay ciyaar jilitaan.
Waddooyinka buuraha ee adag ayaa nagu sugaya Simulator Offside Bus Mountain Simulator, oo ay soo saartay NormanD oo loogu deeqay ciyaartooyda madal -guurka lacag laaan. Waqtiyo madadaalo leh ayaa nagu sugaya ciyaarta halkaas oo aan ku isticmaali doonno basas kala duwan waddooyinka dibedda. Ciyaartoydu waxay awoodi doonaan inay kaxeeyaan, horumariyaan oo wax ka beddelaan baska ay rabaan. Basaska dibadda, oo u eg basaska Maraykanka, waxay la yimaadaan qaab -dhismeed aad u sarreeya.
Ciyaarta, oo leh sawirro midab leh oo cajiib ah, waxaan ku adeegsan doonnaa baallayaasha bareega gaaska shaashadda casriga ah. Ciyaartooydu waxay yeelan doonaan jiingado, dhaadhac, iyo waddooyin toosan oo mayl u jira waddooyinka magaalada ka baxsan. Ciyaarta aan la kulmi doono xilliyo kala duwan, waxaan isku dayi doonaa inaan xakameyno baska buuraha barafka leh.
Simulator Offroad Bus Mountain, oo ay ku ciyaari karaan 100 kun oo ciyaartoy firfircoon Google Play, ayaa helay cusboonaysiintiisii ​​ugu dambeysay Oktoobar 22, 2018. Ciyaartoyda mobilada ee raba ayaa ka soo dejisan kara ciyaarta Google Play. Wax soo saarku wuxuu kaloo leeyahay dhibco 4.4.
Offroad Bus Mountain Simulator Noocyada
Cabirka Faylka: 47.00 MB